healthy life style – Page6– Healthy Life Journal
အိုကီနာဝါ ဂျပန်လူမျိုးတွေ ဘာကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာရတာလဲ . . .
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုကီနာဝါကျွန်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အသက်ရှည်စေတဲ့ နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိုကီနာဝါ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ရောဂါတွေနဲ့ သေဆုံးနှုန်းအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးအားလုံးအတွက် ပျမ်းမျှသက်တမ်းက အနည်းဆုံး ၆၅ နှစ်တော့...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အစားအသောက်တွေကို အရသာခံပြီး မစားသောက်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်တွေများနေသလား။ အစားအသောက်ကို လေရှူသွင်းသလို မျိုချမိနေပြီလား။ ဒီလိုလုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေက အစာမကြေဖြစ်စေတာကြောင့် အစာကြေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။ (၁) အစာကို ကြိတ်ဝါးပါ ထမင်းအလုတ်သေးသေးလေးကိုပဲစားပါ။ အစာတစ်လုတ်နဲ့...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အန်လွန်းလို့ ဘာစားရမလဲ..
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်စဆောင်ချိန်မှာ နေလို့မကောင်း၊ အန်ပဲ အန်ချင်နေလို့ ဘာမှလည်း မစားချင်ပါဘူး။ မစားတော့လည်း အားပြတ်လို့ ဘာစားပေးရင်ရမလဲ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန် နေရထိုင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာမရှိဆုံးအချိန်ကတော့ Morning Sickness...
ကိုယ်တိုက်ပဝါကို မကြာခဏ လျှော်ဖွပ်ခြင်းမလုပ်ပါက . . .
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တဘက်ပဝါအများစုက ၁၀ဝ ရာခိုင်နှုန်းချည်သားနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ရေချိုးသန့်စင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သင့်အရေပြားရှိ ပိုးမွှားတွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေ အတော်များများကင်းစင်သွားပါတယ်။ ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ စိုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ်တိုက်ပဝါနဲ့ သုတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုက်ပဝါနဲ့ တိုက်တာကြောင့် အရေပြားဆဲလ်သေတွေက စိုစွတ်နေတဲ့ တဘက်ပဝါမှာ...